प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस प्रवक्ताको जवाफ : समस्या कालो कोटमा होइन, कालो सोचमा छ : RajdhaniDaily.com
HomeUncategorizedप्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस प्रवक्ताको जवाफ : समस्या कालो कोटमा होइन, कालो सोचमा छ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार गरेको टिप्पणीलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज मंगलबार विहान जवाफ दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार एमालेको भातृ संगठन युवा संघको कार्यक्रमलाई भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्दै कालो कोटधारी केही व्यक्तिले अदालतलाई कुन अवस्था तथा कुन हैसियतमा पु¥याउँदैछन् भन्ने गरेको टिप्पणीलाई लिएर कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले जवाफ दिएका हुन् । उनले समस्या कालो कोटमाभन्दा कालो सोचमा रहेको जवाफ फर्काएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका मुख्य विषयबस्तु यस्ता थिए
कालोकोटधारी केही व्यक्तिहरूले न्यायालयलाई कुन अवस्थामा पु¥याउँदै हुनुहुन्छ? कुन हैसियतमा पु¥याउँदै हुनुहुन्छ ? बडो गम्भीर विषय छ ।
पूर्वन्यायमूर्ति, उहाँहरुले न्यायालयको कसरी हुर्मत लिँदै हुनुहुन्छ ? पेन्सन खाएर । आफ्नो समयमा केही नगर्ने, अनि वर्तमान न्यायालयका कामकारवाहीमाथि हस्तक्षपकारी ताण्डव गर्ने सडकमा ?
यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई कहाँ पु¥याउँछ, तर म भन्न चाहन्छु– यस प्रकारका आउटडेटेड इलिमेन्टहरुबाट, यस्ता इलिमेन्टहरुबाट देशलाई दुष्प्रभावित हुन दिइने छैन, जोगाइने छ ।
सिरहामा सशस्त्र प्रहरी जवानको हत्यामा संलग्न ३ जना पक्राउ
क्वारेन्टाइनमा बसेका गुल्मीका एक व्यक्तिद्वारा आत्महत्या